စွမ်းရည်:300-400 ကီလိုဂရမ် / နာရီ
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အစာသည်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ခွေးနှင့်ကြောင်ကဲ့သို့သောအဟာရလိုအပ်ချက်နှင့်အညီဖော်စပ်ထားသည့်အထူးအစားအစာဖြစ်သည်. အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာများသည်အများအားဖြင့်အသားများပါဝင်သည်, အသားဘေးထွက်ပစ္စည်း, စီရီရယ်, ဘောဇဉ်, ဗီတာမင်, နှင့်သတ္တုဓာတ်. အဆိုပါ U.S ၌တည်၏. အကြောင်း 300 ထုတ်လုပ်သူထက်ပိုထုတ်လုပ်7နှစ်စဉ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာတန်ချိန်သန်း, မည်သည့်ထုပ်ပိုးထားသောအစားအစာအမျိုးအစားတွင်မဆိုပါဝင်သည်. အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပိုင်ရှင်များသည်ထိုထက်မကရွေးချယ်နိုင်သည် 3,000 ကွဲပြားခြားနားသောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာထုတ်ကုန်, ခြောက်သွေ့အပါအဝင်, စည်သွတ်ဘူး, နှင့် Semi- စိုထိုင်းသောအမျိုးအစားများကို, ထိုကဲ့သို့သောဘီစကွတ်အဖြစ်မုန်အဖြစ်, kibbles, နှင့်ရယူထားသော. 1990 ခုနှစ်, ဒီ $ 8 ဘီလီယံစက်မှုလုပ်ငန်း America ရဲ့ကျွေးမွေး၏ 52 ခွေးသန်းနှင့် 63 ကြောင်သန်း.
စီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်သောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာများသည်ခြောက်သွေ့စွာဖြစ်ပေါ်သည်, ဘီစကစ်ပုံစံခွေးအစားအစာကိုအင်္ဂလန်တွင်မွေးထုတ်ခဲ့သည် 1860. မကြာမီတွင်, ထုတ်လုပ်သူများက ပို၍ ခေတ်မီဆန်းပြားသောဖော်မြူလာများကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ကြသည်, ထိုအချိန်ကခွေးများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအာဟာရများပါဝင်သည်. 20 ရာစုအစမှာ, ကြိုတင်ထုပ်ပိုးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာများကိုလည်း U.S အတွက်ရရှိနိုင်ခဲ့ကြသည်. အစပိုင်း၌သူတို့သည်အဓိကအားဖြင့်ခြောက်သွေ့သောကောက်နှံများပါဝင်သည်, ဒါပေမယ့်ပထမကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်, စည်သွပ်မြင်းအသားဖြင့်လုပ်သောခွေးအစားအစာကိုရရှိနိုင်ခဲ့သည်. ၁၉၃၀ ပြည့်နှစ်များကစည်သွတ်ကြောင်ကြောင်အစာနှင့်ခြောက်သွေ့အောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်, ခွေးအစားအစာ၏ meatmeal အမျိုးအစား. ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်များကတီထွင်မှုအချို့မှာခြောက်သွေ့သောကြောင်အစာဖြစ်သည်, ခြောက်သွေ့တဲ့တိုးချဲ့အမျိုးအစားခွေးအစားအစာ, နှင့် Semi- စိုထိုင်းသောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာ.
ခြောက်သွေ့သောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာပြုလုပ်ရန်နည်းလမ်းများစွာရှိပါသည်, အသုံးအများဆုံးဖြစ်စဉ်မှာအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာပြုလုပ်သည့်စက်မှထုတ်ယူခြင်းဖြစ်သည်. ဒီဖြစ်စဉ်ကို ၁၉၅၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များထုတ်လုပ်သည့်နည်းပညာအပေါ် အခြေခံ၍ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အစာများပြုလုပ်ရန်အဆင်ပြေအောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်. အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်သည့်စက်ဖြင့်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အစာပြုလုပ်ခြင်းအပေါ်ပုံတွင်ဤဖြစ်စဉ်ကိုဖော်ပြထားသည်:
1.ပါဝင်ပစ္စည်းများတစ် ဦး အတွက်အတူတကွယူဆောင်နေကြသည် စက်ရောစပ်ခြင်း. ခြောက်သွေ့သောပါဝင်ပစ္စည်းများစိုစွတ်သောပါဝင်ပစ္စည်းများမှမိတ်ဆက်စကားမတိုင်မီမြေပြင်ဖြစ်နိုင်သည်. ပြီးတာနဲ့အတူတူရောနှော, သူတို့ကစိုစွတ်သောမုန့်စိမ်းကိုဖွဲ့စည်းထားပါသည်.
3.အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်သည့်စက်, မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့gရာအသား grinder, ခြောက်သွေ့သော extruded အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာများအတွက်အဓိကချက်ပြုတ်သည့်အဆင့်ဖြစ်သည်. အပူချိန်နှင့်ဖိအားများအောက်တွင်မုန့်စိမ်းကိုချက်ပြုတ်သည်. အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်သည့်စက်၏အဆုံးတွင်, ပူပြင်းတဲ့မုန့်စိမ်းတစ် ဦး ပုံဖော်သေနှင့်ဓားမှတဆင့်ဖြတ်သန်းရတယ် (အသား grinder ၏လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်ဆင်တူ) သူတို့ပုံမှန်လေဖိအားအောက်မှာတခါသေးငယ်တဲ့အပိုင်းပိုင်း kibble သို့လျင်မြန်စွာတိုးချဲ့ရှိရာ.
4.Kibble သည်မီးဖို၌အခြောက်ခံသည်။ ကွတ်ကီးကဲ့သို့ cracker ကဲ့သို့သိုလှောင်ထားနိုင်စေရန်အစိုဓာတ်နည်းသည်. ခြောက်သွေ့သောမီးဖိုသည်နောက်အဆင့်တစ်ခုဖြစ်သည်.
5.အအေးပြီးနောက်, kibble သည်အပေါ်ယံလွှာများဖြန်းသောစက်ကိုဖြတ်သန်းသွားနိုင်သည်, သောယေဘုယျအားဖြင့်တစ်အရသာ enhancer ဖြစ်ပါတယ်.
6.ထုပ်ပိုး (အိတ်များ, သေတ္တာများ, အိပ်ယာခင်း, စသည်တို့) တံဆိပ်ပေါ်တွင်ကြော်ငြာအလေးချိန်နှင့်တွေ့ဆုံရန်အတိအကျပမာဏအတိအကျဖို့နောက်ဆုံးခြေလှမ်းစဉ်အတွင်းဖြည့်သည်. နောက်ဆုံးရလဒ်မှာအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာများ၊.
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်သည့်စက်,အရာလည်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် ရေပေါ်ငါးအစာကျွေး, အမျိုးမျိုးသောအမျိုးအစားများမှအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အစာတောင့်များထုတ်လုပ်ရန်ဖျက်ဆီးခြင်းနည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်,extrusion အချို့အပူချိန်အောက်မှာရောထွေးပါဝင်ပစ္စည်းများချက်ပြုတ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်, အစိုဓာတ်နှင့်ဖိအား .. အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာထုတ်လုပ်စက်, extruding chamber အတွင်းရှိအပူချိန်သည်လျှပ်စစ်အပူပေးစက်မှ 150-180 is ဖြစ်သည်. အပူချိန်မြင့်မားခြင်းကြောင့်စက်လည်ပတ်စဉ်အတွင်းဘက်တီးရီးယားနှင့်ရောဂါပိုးကိုသေစေနိုင်သည်. အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်သည့်စက်၏ panel တွင်အပူချိန်ညွှန်းကိန်းရှိသည်, တစ်ချိန်ကကသတ်မှတ်ထားအပူချိန်ရောက်ရှိ, ဒါကြောင့် thermocouple ၏တုံ့ပြန်မှုအားဖြင့်အလိုအလျှောက်အပူကိုရပ်တန့်ပါလိမ့်မယ်. မြင့်မားသောအပူချိန်မှည်စဉ်အတွင်း, ကုန်ကြမ်း၏ကစီဓါတ်နှင့်ဖိုင်ဘာရောင်ဖြစ်လာသည်. ထိုအခါဖိအား - တင်းကျပ်စွာအခြေအနေအောက်မှာ, ပစ္စည်းမှိုပုံဖော်ခြင်းဖြင့်လုံးလေးများသို့ဖွဲ့စည်းလိမ့်မည်. အဓိက ၀ င်ရိုးရဲ့အဆုံးမှာကျည်တောလေးတွေကိုအချို့သောအရှည်အထိဖြတ်ဖို့ဖြတ်စက်တစ်လုံးရှိတယ်.
Extrusion ကိုနည်းပညာဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်, အောက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်အခြေအနေတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောအစာကျွေးကုန်ကြမ်းအစာကျွေး (ထိုကဲ့သို့သောရောစပ်အဖြစ်, အပူ, ဖြတ်တောက်ခြင်း, စသည်တို့) သေခြင်းမှတဆင့်စီးဆင်း, ပစ္စည်းဖွဲ့စည်းသို့မဟုတ်မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုဓာတ်ငွေ့ပါစေ. စဉ်ဆက်မပြတ်ပုံမုန့်စိမ်းအဖြစ်အချည်းနှီးသောပြည်နယ်မှ feedstocks လုပ်ခြင်း, ရရှိလာတဲ့ငါးပိသတ္တုပြားထဲမှာအပေါက်မှတဆင့် extruded ဖြစ်ပါတယ်. အပေါက်များ၏အချင်းဟာလုံးပတ်လည်အချင်းကိုသတ်မှတ်သည်, အရာအမျိုးမျိုးသောကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားကနေအထိနိုင်ပါတယ်.
မော်ဒယ် စွမ်းရည် (t / h) စွမ်းအား (kw) အစာကျွေးပါဝါ
DGP70 0.15-0.3 18.5 စက်ယန္တရားနို့တိုက်ကျွေးရေး φ70 0.75
DGP80 0.3-0.4 22/27 စက်ယန္တရားနို့တိုက်ကျွေးရေး φ80 1.5